Raisul wasaare Saacid oo shaciyay wafdi kasocda wasaarada waxbarashada oo kormeeri doona Caabudwaaq |
Raisul wasaare Saacid oo shaciyay wafdi kasocda wasaarada waxbarashada oo kormeeri doona Caabudwaaq
Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa saaka booqday Dugsiga H/dhexe iyo sare ee Shire Jaamac Axmed, kaas oo ah Dugsiga ugu weyn ee ardayda degmadu wax ka bartaan.
Munaasabad uu soo qaban qaabiyay Agaasimaha Arrimaha Bulshada ee Xafiiska R.wasaaraha Cali Cabdi Wardheere (Cali-yare), laguna qabtay Dugsiga Shire Jaamac ayaa Ra’iisal Wasaaruhu waxa uu qalab waxbarasho ku guddoonsiiyay maamulka Dugsiga waxayna isugu jireen Buugaag, Qalimaan, iyo agab kale oo waxbarasho.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa ardadya Dugsiga ku dhiirageliyay waxbarashada, wuxuuna xusay in ay yihiin ardayda maanta madaxda dalka ee Berrito, isaga oo u balan qaaday in intii karaankooda ay dowladdu ka taageeri doonto sidii ay u heli lahaayeen adeegyada aas aasiga u ah waxbarashada.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa u balanqaaday inuu u soo dirayo degmada wafdi ka socda Wasaaraddda Horumarinta iyo adeega Bulshada, si ay qiimeyn ugu sameeyaan baahida ay u qabaan horumarinta waxbarashada, illaa heer Jaamacadeed.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa ugu dambeyntii booqday saldhiga degmada Caabudwaaq halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada sugida amniga wuxuuna kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan xasilinta amniga degmada iyo gobolkaba. Wuxuuna dhanka kale kormeeray qeybo ka mid ah Garoonka Caabudwaaq oo ay dhowaan aas aaseen dad qurbajoog ah oo si iskaa wax u qabso ah uga shaqeeyey.